Tue, May 26, 2020 at 8:53pm
काठमाडौँ, ३१ असार । धितोपत्र बजारमा मंगलबार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.४५ विन्दुले बढेर एक हजार २५९.०१ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९७ विन्दुले बढेर २७१.२५ मा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से उकालो लागेपनि कारोवार रकममा भने उल्लेख्य वृद्धि..
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को शेयर बिक्रीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको छ । प्रति शेयर न्यूनतम १०३२ रुपैयाँका दरले शेयर बिक्री गर्न लागिएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्री गर्न छलफल थालेको छ। राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ४ गते नेप्सेलाई पत्र लेखेर शेयर बिक्री सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । नेप्सेमा सरकारको ५८.६६..
काठमाडौँ, ३० असार सामान्य अवस्थामा रहेको धितोपत्र बजारमा सोमबार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ५.०८ बिन्दुले बढेर एक हजार २५४.५६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत १.७१ बिन्दुले बढेर २७०.२८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक बढे पनि अपेक्षाकृतरूपमा कारोवार रकममा भने वृद्धि..
शेयर बजार : नेप्से झिनो अङ्कले सुधार, कारोवार रकम औसत
काठमाडौँ, २९ असार । धितोपत्र बजारमा साताको आईतबार पहिलो दिन शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०.९५ बिन्दुले बढेर एक हजार २४९.४९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापक सेन्सेटिभ परिसूच्क ०.२४ बिन्दुले बढेर २६८.५७ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से सामान्य अङ्कले बढे पनि कारोवार रकम भने..
काठमाडौं, २८ असार । वित्तीय क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय चर्चा चलिरहँदा सेयर बजार भने निरनतर ओरालो लागेको छ । ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) को चर्चासँगै वाणिज्य बैंकको सेयर खरिद बिक्रीमा आकर्षण देखिए पनि सेयर कारोबार नेप्से परिसूचक भने उकालो लाग्न सकेको छैन । बिग मर्जरको चर्चा शुरु भए देखिका अधिकांश दिनहरुमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ ।..
काठमाडौँ, २६ असार बुधबार ओरालो लागेर बन्द भएको शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि सामान्य अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६२ बिन्दुले घटेर एक हजार २४८ दशमलव ५३ मा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीका शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव शून्य एक अङ्कले घटेर २६८ दशमलव ३२ मा..
काठमाडौँ, २५ असार धितोपत्र बजारमा मङ्गलबार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लाग्यो । उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचक १.१२ अङ्कले घटेर एक हजार २४९.१५ मा पुगेर रोकियो । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.७३ अङ्कले घटेर २६८.३३ मा थामियो । स्टकका अनुसार आज कूल १६८ कम्पनीका २९ लाख ९८ हजार ९४७ कित्ता शेयर रु ५७ करोड ३४ लाख..
लगातार घटेको शेयर बजारमा हरियाली, लगानीकर्ताको आत्मबल बढ्यो !
काठमाडौं, २४ असार । धितोपत्र बजारमा साताको शुरुआतदेखि नै ओरालो लागेको कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने उकालो लागेको छ । उतारचढावका बीच मंगलबार नेप्से परिसूचक २.९२ अङ्कले बढेर एक हजार २५०.२७ मा पुगेर थामियो । त्यस्तै ठूला कम्पनीका शेयर कारोवार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२७ अङ्कले बढेर २६९.०६ मा पुग्यो । परिसूचक बढे पनि कारोवार रकममा भने खासै प्रगति देखिएन । स्टकका अनुसार..
काठमाडौँ, २२ असार साधारण शेयर बिक्री गर्नेक्रम बढिरहेका बेला आईतवारदेखि आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि शेयर बिक्री शुरु भएको छ । सो संस्थाको कूल चार लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री शुरु भएको हो । बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलका अनुसार कूल चार लाख कित्ता साधारण शेयरमध्ये पाँच हजार कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारी र २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ ।..
बिष्णु प्रसाद बस्याल शेयर बजार विश्लेषक काठमाडौं, २२ असार । नेपालको शेयर बजारमा अहिले केही आशाको किरण देखा पर्दै छ । यसअघि मार्च महिनाको पहिलो सातामा ११०० बिन्दुमा पुगेर नेप्सेले बटम लगाएको हो । त्यस्तै, मई महिनाको अन्तिममा नेप्से १३५० को आँकडालाई छुँदै आफ्नो उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । तसर्थ अहिले समग्रमा हेर्दा बजारको यो नै बुलिश ट्रेण्ड हो । यस तथ्यलाई बुझेर लगानीकर्ता..
साताको शेयर बजार : अढाई अर्ब माथिको कारोबार, दुई कम्पनीको शेयर सूचीकृत
काठमाडौँ, २१ असार धितोपत्र बजारमा यस साता कूल १७७ कम्पनीको एक करोड ६० लाख ९९ हजार ९६३ कित्ता शेयर कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर रु दुई अर्ब ६६ करोड ९७ लाख नौ हजार १७२ मूल्य बराबरको कारोवार भयो । अघिल्लो साताको बिहीबार १.१४ बिन्दुले घटेर एक हजार २५७.१५ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको कारोवार मापक नेप्से परिसूचक यस साताको..
घट्यो शेयर बजार : नेप्से परिसूचक ८ अङ्कले घटेर १ हजार २ सय ६० अङ्कमा
काठमाडौँ, १९ असार मङ्गलबार र बुधबार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने आठ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ८.२७ बिन्दुले घटेर एक हजार २६०.४७ मा झरेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.५३ अङ्कले घटेर २७१.४५ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि कारोवार रकममा भने..
पूँजीबजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, नेप्से १५ अङ्कले उकालो लागेर १ हजार २ सय ६८ अङ्कमा
काठमाडौँ, १८ असार मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १५.६२ अङ्कले बढेर एक हजार २६८.६८ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ३.०२ अङ्कले बढेर २७२.९८ विन्दुमा पुगेको छ । परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको छ । बुधबार..
नेप्सेमा उतारचढाव, सातामा अढाइ अर्बको कारोवार
काठमाडौँ, १४ असार धितोपत्र बजारमा यस साता पनि उतारचढावपूर्ण कारोवार भयो । अघिल्लो बिहीबार अर्थात असार ५ गते एक हजार २६४।३६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम दिन असार १२ गते एक हजार २५७।१५ विन्दुमा पुगेर बजार बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर रु दुई अर्ब ५२ करोड ६१ लाख ५७ हजार ४४४ मूल्यमा रु ७६ लाख ७२..
आँधीखोला लघुवित्तले ४ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्दै
काठमाडौँ, १३ असार स्याङ्जाको बयरघारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आँघीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चार लाख कित्ता साधारण सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले आज एक आह्वानपत्र प्रकाशित गरी यही असार २२ गतेदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको उल्लेख गरेको हो । कम्पनीका अनुसार पाँच हजार कित्ता साधारण सेयर कम्पनीका कर्मचारी र २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको विवरणमा उल्लेख..
काठमाडौँ, १२ असार साताको शुरुआती दिनमा उकालो लागेको नेप्से परिसूचक आज पनि घट्ने क्रममा छ । बिहीबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १.१४ अङ्कले घटेर एक हजार २५७.१५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटे पनि ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक भने सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक ०.३५ अङ्कले बढेर २७१.१६ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका..
मार्जिन ट्रेडिङले सेयर लगानीकर्ता उत्साहित, बजारमा के पर्ला असर ? यस्तो भन्छन् राष्ट्र बैंकका गभर्नर !
काठमाडौं, १२ असार । २८ वटै बाणिज्य बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुलाई डाकेर राष्ट्र बैंकले अहिलेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न मर्जरमा जानु पर्ने धारणासमेत सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बिहीबार ६ वटा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ । नेप्सेले एक कार्यक्रम गरेर ती कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र वितरण गर्‍यो । क्रिस्टल कंचनजंघा सेक्युरिटिज, भिजन..
शेयर बजार ३ अङ्कले घटेर १ हजार २ सय ५८ अङ्कमा थामियो
काठमाडौँ, ११ असार सोमबार र मङ्गलबार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २.७८ अङ्कले घटेर एक हजार २५८.२९ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.६३ अङ्कले घटेर २७०.८१ मा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोवार रकम भने..
काठमाडौँ, ९ असार आइतबार ओरालो लागेको शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ५.७५ बिन्दुले उकालो लागेर एक हजार २६०.१० अङ्कमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.४४ बिन्दुले बढेर २७१.०४ मा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक उकालो लागे पनि कारोवार रकम भने उल्लेख्यमात्रामा अगाडि बढ्न..
काठमाडौँ, ८ असार लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा आज कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । आज नेप्से १० दशमलव ०१ अङ्कले घटेर एक हजार २५४ दशमलव ३५ बिन्दुमा ओर्लिएको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २ दशमलव ०१ अङ्कले घटी २६९ दशमलव ६० बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक ओरालो लागेसँगै कारोवार रकमसमेत घटेको..
काठमाडौँ, ७ असार । धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो । शुरुका केही दिन ओरालो लागेको नेप्से साताको अन्तिम तिर आइपुग्दा उकालो लाग्ने सङ्केत गर्यो । यद्यपी कारोवार रकममा भने उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कूल १७४ कम्पनीका ६४ लाख ३० हजार ८४ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ९१ करोड ४९ लाख..
काठमाडौँ, ६ असार धितोपत्र बजारमा अवैध लगानी हुन नदिने लक्ष्यका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज एक निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७६ जारी गर्दै उक्त निर्देशन अटेर गर्नेलाई अधिकतम रु पाँच करोडसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अवैधरुपमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नेलाई पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक व्यवसाय गर्न..
काठमाडौँ, ५ असार । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा कूल रु ५४ अर्ब ९६ करोड बराबरको धितोपत्र सूचीकृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीमा’ दश महिनामा रु २४ अर्ब ७५ करोड बराबरको साधारण शेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, रु २० अर्ब २४ करोड बराबरको शेयर..
काठमाडौँ, ४ असार । साताको शुरुआतदेखि नै अस्थिर रहेको धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक आज फेरि ओरालो लागेको छ । नेप्से परिसूचक ०.२० बिन्दुले घटेर एक हजार २५८.४६ अङ्कमा पुगेको छ । त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक भने ०.२३ बिन्दुले बढेर २७०.५२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । स्टकका अनुसार बुधबार १६९..
काठमाडौँ, २ असार लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचकमा आज भने सामान्य सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २.६३ बिन्दुले वृद्धि भई एक हजार २६०.९० अङ्कमा पुगेको छ । त्यस्तै ठूला कम्पनीका कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२९ ले वृद्धि भई २७०.२६ अङ्कमा पुगेको छ । परिसूचक सामान्य सुधार भए पनि कारोवार रकम भने..
काठमाडौँ, १ असार लगातार ओरालो लागेको शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ११.३६ बिन्दुले घटेर एक हजार २५८.२७ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.८७ बिन्दुले घटेर २६९.९७ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोवार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको..
काठमाडौँ, ३२ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव परेको छैन । यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४४.३२ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । बजेटपछि बजार नौ दिन खुला रह््यो । बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था गरेपनि बजार भने निरन्तर ओरालो..
काठमाडौँ, ३० जेठ निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर कारोबार मापक परिसूचक बिहिबार पनि करीब तीन अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.५३ बिन्दुले घटी २७१.८१ मा पुगेको छ । परिसूचक घटेसँगै कारोबारमा पनि गिरावट आएको छ । स्टकका अनुसार..
काठमाडौँ, २९ जेठ । मङ्गलबार झिनो अङ्कले सुधार देखिएको पूँजीबजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पुनः ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३.५० बिन्दुले घटेर एक हजार २७२.४८ अङ्कमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ०.५० बिन्दुले घटेर २७२.३५ अङ्कमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार आज कूल १७४ कम्पनीका १८..
काठमाडौँ, २९ जेठ ‘गोरखा भूकम्प’ भारतको नाकाबन्दी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण लागत बढ्दै गएपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । आयोजना शुरु गर्दा रु ३५ अर्ब लागत रहेको सो आयोजनाको कूल लागत वृद्धि भई रु ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने भएको छ । त्यसमा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै रु २१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने भएको छ ।..
Results 589: You are at page5of 20